Asparagus Maitso mahatalanjona miaraka amin'i Parmesan | ThermoRecipes
Asparagus maintso miaraka amin'ny parmesan
Verduras32 minitraOlona 2
Tsy misy isalasalana fa misy zavatra ilaina amin'ny zavatra maro tsara izany amin'ny resipeo rehetra. Ny asparagus dia azo ampiasaina amin'ny omelette na amin'ny risotto izay hahagaga hatrany hatrany. Ary ny parmesan ... ahoana ny parmesan? Izy no fromazy mety indrindra amin'ny lovia paty.
Fa inona no mitranga rehefa miaraka amina singa roa samy hafa toy izany? A, a fitambarana mety toy ity takelaka asparagus misy parmesan ity.
Tsy hiresaka ny tsirony aho satria efa azonao an-tsaina izany. Ka tsy azoko atao ihany ny manoro hevitra anao mba handray an'ity recette ity raha tianao gaga ny vahininao.
Ho fanampin'izay dia tsy maintsy tsiahivina fa izao, amin'ny lohataona, asparagus no tsara indrindra.
Miandry ny hevitrao aho!
1 Asparagus maintso miaraka amin'ny parmesan
Ny fitambarana tsara indrindra hankafizana asparagus maitso sy lohataona ary fromazy Parmesan tsara.
Fotoana hiketrehana: 32M
Fotoana manontolo: 32M
Asparagus maitso 10
Menaka 10 g
Divay fotsy 50 g
40 g an'ny Parmesan grated
100 g ny crème
Asio rano 800 g ao anaty vera sy programa 10 minitra amin'ny 100º ary ny hafainganana 1.
Mandritra ny famoahana ilay asparagus mamela ireo toro-hevitra tsy miova. Tapaho ny tendrony ambany tery. Sasao izy ireo ary apetraho ao amin'ny Varoma mba hialana amin'ny fifandraisan'izy ireo.
fandaharana 10 minitra, maripana Varoma, hafainganana 3. Aorian'ny fotoana dia velomy amin'ny ranomandry ilay asparagus.
Esory ao anaty vera ny rano. Voaso ary tetehio ny tongolo, ampio amin'ny vera miaraka amin'ny menaka. Tetehina mandritra 4 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5. Ampidinina eo amin'ny lelany ireo sombin-kazo ireo ary endasina 5 minitra, hafainganana 100º ary sotro.
Avy eo ampio ny divay fotsy, programa 3 minitra, maripana Varoma, hafainganam-pandehan'ny sotro, tsy misy beakaka. Amin'ity fomba ity dia hahazoantsika etona kokoa ny alikaola.
Arotsahy ny crème, ny fromazy ary ny vanim-potoana. FANDAHARAM-POTOANA 3 minitra, hafainganana 80º ary sotro.
Mandritra ny fandaminana ny asparagus mangatsiaka sy raraka ao anaty lovia. Arotsaho eo amboniny ny saosy ary asio karazana fromazy Parmesan vitsivitsy ary aroso avy hatrany.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Celiac, Salady sy legioma, General, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Resaka varoma, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Appetizers » Asparagus maintso miaraka amin'ny parmesan
Tena tsara ny fomba fahandro azy, nefa lafo vidy i Parmesan ary tsy ananan'izy ireo hatraiza hatraiza. Tsy azonao atao ve ny mametraka ondry grated sitrana ao?. Tena tiako ny bilaoginao. Arahabaina
Hevitra tsara inona ry Beatriz!
Miaraka amin'ny fromazy toy izany dia homenao tena feno vatana sy tena any ambanivohitra ... tiako be!
Lali dia hoy izy:
Salama. Amin'ity faran'ny herinandro ity dia manana vahiny aho ary tsy nikasa ny hanao ny làlana voalohany. Tena tian'izy ireo izany.
Valiny tamin'i Lali
Faly aho fa nankafizinao io tolotra io. Ho hitanao fa mora ny manao azy ary manankarena izany!
mayra tsara be zany!
fa misy fisalasalana mamely ahy? Fa maninona no mangatsiaka ny asparagus? Resipeo ve no hanina mangatsiaka sa rehefa arotsaka ny saosy mafana vao mafana?
ny asparagus dia mangatsiatsiaka mba hanapahana ny fandrahoan-tsakafo, raha tsy izany dia ho malefaka loatra izy ireo.
Ny lovia vokatr'izany dia toy ny salady mafana izay misy ny asparagus amin'ny hafanan'ny efitrano ary mafana ny saosy fa tsy mangotraka.
Raha tianao ny asparagus dia manoro hevitra anao aho mba andramo, tena matsiro!
Saladin'ny atody maraokana